Madaxweynaha dowlada Puntland oo shacabka Puntland ugu hambalyeeyay Ciidul Fidriga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowlada Puntland oo shacabka Puntland ugu hambalyeeyay Ciidul Fidriga
Madaxweynaha dowlada Puntland oo shacabka Puntland ugu hambalyeeyay Ciidul Fidriga
July 5, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowlada Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali. Sawirka: Xafiiska warfaafinta Madaxweynaha.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa dhalashada bisha Shawaal ee Ciida Fidriga ugu hambalyeeyay dhamaan Muslimiinta caalamka gaar ahaan shacab weynaha reer Puntland.
Madaxweynaha ayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed Eebbe uga baryey in ay ku ciidaan farxad iyo nabad gelyo isla markaana ay is cafiyaan isuguna hambalyeeyaan farxadda maalinta barakaysan ee ciidul firiga.
“Ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak, waxaan idiin rajeynayaa indinka, xaasaskiina, carruurtiina iyo eheladiina meel walba oo aad joogtaan in aad ku ciidaan ciid wanaagsan oo nabadgelyo leh.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale Eebbe uga baryey guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inuu ka aqbalo Soonkii ay Soomeen, intii dhimatayna uu ugu naxariisto fadliga Soonka awgii, sannakaan sannadkiisana uu ku gaarsiiyo bash-bash iyo barwaaqo.
Bisha Shawaal ayaa laga arkay qaybo kamid ah wadamada caalamul Islaam iyo Soomaaliya iyadoo beri oo Arbaco ah si rasmiya loo ciidi doono.
August 24, 2016 Guddoomiyaha baarlamaanka dowlada Puntland Axmed Cali Xaashi oo booqday goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii Gaalkacyo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in la hakiyay qaadkii Miirowga ee ka imaan jiray dalka Kenya. Wasiirka wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada dowlada federaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac “Jaangali” ayaa warbaahinta u sheegay [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirkii ka socday Muqdisho oo u dhaxeeyay hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya ayaa ku dhamadaay heshiis la’aan maanta oo Axad ah. Sida ay sheegayaan wararka, madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa isaga baxay shirka kadib markii [...]